Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Kunze kweNyika Zvonzi Hazvivhoti Zviri Kwazvigere
Gurukota rezveupfumi, VaPatrick Chinamasa
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zviine tarisiro yekuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rino zviri munyika dzazvigere zvakaoreswa mwoyo neMugovera, apo gurukota rezveupfumi, VaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti izvi hazvisi kuzokwanisa kuitika gore rino sezvo hurumende isina zvikwanisiro.
Vachitaura pamabiko ekupemberera makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga akaitwa muGaithersburg, mudunhu reMaryland muAmerica, VaChinamasa vakati hurumende pamwe nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vari kuzviziva kuti vari kunze vari kuda kuzadzisa kodzero dzavo dzekuvhota vari kwavari, sezvinobvumidzwa nebumbiro remitemo, asi gore rino hazvisi kubudirira, vachiti vanotarisira kuti zvichitika musarudzo dzinotevera.
VaChinamasa vakatorawo mukana wekuungana kwevana veZimbabwe uyu nekuvatenda nekucherechedza kwavanoita gore roga-roga zuva rakawana nyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain, unove musi wa 18 Kubvumbi.
VaChinamasa, avo vanga vari muWashington D.C. kumisangano yeWorld Bank neIMF, vakatiwo kunyange hazvo Zimbabwe iri nhengo yemasangano maviri aya, iri kukundikana kukwereta mari kumasangano maviri aya nekuda kwechikwereti chairi kutadza kubhadhara senyika.
Vakati panhaurirano dzose dzavari kuita neIMF, World Bank, America pamwe nedzimwe nyika dzekumawirira, vari kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Gurukota rezveupfumi iri rakatorawo mukana uyu kutenda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzavanotumira kuvabereki nehama neshamwari kumusha, vachiti dziri kubatsira zvikuru mukuendesa nyika mberi, uyewo kurerutsa mutoro unofanirwa kutakurwa nehurumende.
VaChinamasa vakati mari inotumirwa kubva kunze inobatsira zvikuru panenge pachidiwa mari yekunze, kana kuti foreign currency, vachiti kuti pawanikwe mari yekunze iyi panofanirwa kunge patotengeswa zvinhu zvakaita sezvirimwa nezvicherwa kunze kwenyika. Asi vakasekesa vanhu vakaungana pamabiko aya pavakati mari dziri kubva kunze kwenyika dzinenge dzave kudzikira, vakakurudzira vanhu kuti vaedze kuti wedzereyi.
Vakakurudzirawo zvizvarwa zviri kunze kwenyika zvine mari pamwe nehunyanzvi, uye vanhu vazvinoziva vane mari kuti zvidzoke kumusha vazotanga mabhizimusi kana kuti vavanoziva ava vazosima mari dzavo munyika.
VaChinamasa vakapeta mashoko avo vachitenda vana veZimbabwe vaive pamusangano uyu kuti vakanga varatidza kudada nenyika yavo, vachiti vanonzwa kuti zvave kudadisa kunzi uri chizvarwa cheZimbabwe mazuva ano. Vakati vaisimbonzwa kuti munguva yekuoma kwezvinhu yadarika iyi, vamwe vakanga vozviti ndevekuUganda kana Nigeria, asi vachizorasiswa nekukundikana kutaura sevekuNigeria.
Misangano yeWorld Bank neIMF iyi yakapera neSvondo muWashington D.C., uye yaipindwa nemagavhuna emabhanga, makurukota ezveupfumi, nhengo dzeparamende, vemasangano akazvimirira, nemapoka akasiyanasiyana vanobva munyika dzepasi rose.
VaChinamasa vakaperekedzwa kumisangano iyi nagavhuna veReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya, pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo.